Maalgelinta liita maaha kaliya macaamiisha baabuurta. Abaabulka Capital wuxuu bixiyaa maalgalin dabacsan oo loogu talagalay bixinta farsamooyin cagaaran oo caqli-gal ah oo kaydiya lacagta iyo deegaanka, oo loo yaqaan 'model-as-a-service ™ model.
Maalgashiga sinnaanta tooska ah wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa 2015
Shirkad maaliyadeed oo khaas ah ayaa lagu wadaa in lagu rakibo kaabayaasha wax-qabadka leh iyo kuwa la cusbooneysiin karo. Abuuri mashruucyada yaryar ee shirkadaha kale ee iska dhejiya. Khariidadaha guusha ee shirkadu soo saartay si toos ah ujeedooyinka McKnight's Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest barnaamijka si loo dhiso nadiifin, dabacsanaan, iyo dhaqaale ahaan caafimaad oo caafimaad qabta kaas oo yareeya gaaska qolfaha hawada.
Soo Celinta Lacagta: Shirkadda ayaa si fiican u fulisa qorshaheeda. Bishii Sebtembar waxay kor u qaadday $ 200 milyan oo maalgelin ah, McKnight wuxuu calaamadiyay maalgashadayada.
Soo celinta Deegaanka:
201,322 Tamarta loo kaydiyay (kWh)
4,233,069 Tamarta dib loo cusbooneysiin karo (kWh)
Intaa waxaa dheer, Abuuridu wuxuu maal galiyay in ka badan 10 MW gudaha jardiinooyinka bulshada ee Minnesota.
Abuuri ayaa daaqad u siiyay ganacsiyada caatada ah ee xaliya isbedelka cimilada maanta tiknoolajiyada jira waxaana ku xaddidnahay taageerada dowladda federaalka ah. In kasta oo suuqa sahayda cadceedu ay sii wadi doonto bixinta boosaska fursadaha, waxaan rajeyneynaa in baaskiilada ku dul yaala iyo kumbuyuutarka batroolka uu sii wadi doono sii wadi doono. Intaa waxaa dheer, Abuuridu waxay ogaanaysaa fursadaha ku saabsan biomass, daaweynta biyaha, microgrids iyo ka shaqaynta qashinka.
Sawir Sawir ah: Abuuri